Himalaya Dainik » शनिको प्रभावले यी २ राशिलाई लाग्दैछ साढेँ सातको दशा !
शनिको प्रभावले यी २ राशिलाई लाग्दैछ साढेँ सातको दशा !
जब कुनै ग्रह वक्री हुन्छ तब त्यसको दृष्टिको प्रभाव अलग हुन्छ। आगामी वर्ष २०७८ को जेठ ९ गते शनि वक्री हुनेछ। शनिदेवको वक्री दृष्टि कुन राशिमा बढी पर्छ र यसको नराम्रो प्रभावबाट कसरी बच्न सकिन्छ।
– फलामलाई शनिको धातु मानिन्छ । शनिबार फलाम घरमा ल्याउँनुहुँदैन । यस दिन फलामबाट बनेका सामानहरु दान गर्नु शुभ मानिन्छ ।
– शनिबार मासको कालो दाल किन्न हुँदैन । शनिबार यो दालबाट बनेको खिचडी दान गर्दा शुभ हुने विश्वास गरिन्छ ।
– शनिबार सरसोँको तेल घरमा ल्याउँनुहुँदैन । तर, यस दिन यो तेल दान गर्न सकिन्छ । शनि देवलाई प्रशन्न बनाउन तेल शनिदेवलाई अभिषेक गराउँन सकिन्छ ।
-शनिबार जुत्ता चप्पल किन्न हुँदैन । शनिबार जुत्ता चप्पल किन्दा शनिदेव रिसाउने र असफलता मिल्ने विश्वास गरिन्छ ।
– शनिदेव न्यायका देवता हुन् । शनिवार उनको विशेष पूजाआरधाना हुने भएकाले यो दिन कसैको पनि अपमान गर्नुहुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्- यी ४ राशि भएका व्यक्तिलाई भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ
वृष राशिका जातकमा सुन्दर र बिलासी सामान किन्ने शौक हुन्छ ।औसत ब्रान्डका सामग्री यी राशिका व्यक्तिलाई मन पर्दैन । तसर्थ यी राशिका व्यक्ति स्वतः धेरै धन कमाउन लालायित हुने गर्दछन् । साथै वैभव प्राप्तिका लागि पनि यस राशिका व्यक्तिलाई भाग्यमानी मानिन्छन् । उनीहरूलाई धनी बनाउन राशि नै सहायक बन्ने गर्दछ ।
धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन् । यस राशिका व्यक्तिलाई भौतिक वस्तुको आकर्षण हुने गर्दछ ।ठुला घर, कार, व्यापार व्यवसाय प्रति उनीहरू लिप्त हुन्छन् । दृढ निश्चय भएका कारणले पनि सम्पत्ति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका व्यक्ति आफै पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ ।
कर्कट राशिका जातकलाई धन, सम्पत्ति कमाउन भाग्यले नै साथ दिने गर्दछ । यी राशिका व्यक्ति अवसरका खोजीमा हुन्छन् । जहाँ उनीहरूको रहर पूरा गर्न राशि नै सारथि बनिदिन्छ ।कर्कट राशिलाई स्वभाव सन् धनी बनाउन उनीहरूको आकाङ्क्षा र भाग्य बलियो हुने गर्दछ । यी राशिका व्यक्ति जग्गाजमिनको कारोबारबाट चाडै धनी बन्ने गर्दछन् ।
सिंह राशिका जातकलाई भीडका बिचमा आफ्नो पहिचान बनाउने शौक हुन्छ । उनीहरू अन्य राशिका व्यक्ति भन्दा फरक हुने चाहाना राख्दछन् । साथै उनीहरूलाई सम्पत्तिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ । महँगा कार, गरगहना, रुपैयाँ पैसाको चाहाना उनीहरूको सामान्यतया पूरा हुन्छ ।